Nagarik News - गोवामा के गर्दैछिन् सन्नी लियोन?
होमपेज / कला / बलीवुड / गोवामा के गर्दैछिन् सन्नी लियोन?
गोवामा के गर्दैछिन् सन्नी लियोन?	05 Aug 2013 | 11:00am सोमबार २१ श्रावण, २०७०
मुम्बई – पोर्नस्टार सन्नी लियोन बलिउडमा जम्ने तयारीमा छिन्। सुटआउट एट वाडालामा आइडम डान्स गरेपछि सनी यतिबेला आफ्नो चौथो हिन्दी फिल्म ज्याकपटको सुटिङबा व्यस्त छिन्। गोवामा सुटिङ भइरहेको ज्याकपटमा सनीको साथमा सचिन जोशी र नसिरुद्धिन शाहले मुख्य भूमिकामा देखिँदैछन्। चार दिनदेखि सनी लियोन र नसिरुद्धिन गोवाको प्राकृतिक मौसमको आनन्द लिइरहेका छन्। नसिरुद्धिनका साथ पहिलो पटक सनी लियोन पर्दामा देखिन लागेकी हुन्। सनीले महेश भट्टको जिस्म २ बाट बलिउडमा डेब्यु गरेकी थिइन्। त्यसपछि सञ्जय गुप्ताको सुटआउट एट वडालामा सनीलाई एउटा आइटम डान्समा देखिएको थियो। तर ज्याकपटमा उनको राम्रो भूमिका छ।ज्याकपटमा नसिरुद्धिन एक क्यासिनो मालिकको भूमिकामा छन्। उनको सेक्रेटरीको भूमिका सनी लियोनले निर्वाह गर्दैछिन्। निसरुद्धिनसँग काम गर्दा सुरुमा सनी निकै डराएकी थिइन्। 'नसिरुद्धिन शाह निकै सिनियर र अनुभवी कलाकार हुन्', सनीले भनिन्- 'म उनको जस्तो दमदार अभिनय गर्न सक्दिनँ होला।' नसिरुद्धिनले चाहिँ सनी निकै मिहिनेती केटी भएकी टिप्पणी गरेका छन्।जुवाघर मालिकको भूमिका निर्वाह गरे पनि नसिरुद्धिन शाह जुवालाई घृणा गर्छन्। « दीपिकाको नेपाल सम्झना
'क्रिस ३'को ट्रेलर सार्वजनिक »
टपलेस भइनन् सन्नी सन्नी लियोनलाई डान्सको चिन्ता सनी लियोन अझै पोर्न फिल्म खेल्दै रागिनी एमएमएस २ को तयारीमा सन्नी लिओन नागरिकLatest from